यौ`न इच्छानै नभएकी एक युवतीको कहानी…पहिलो पटक सम्पर्क गर्दा यस्तो भयो… – Taja Khawar
यौ`न इच्छानै नभएकी एक युवतीको कहानी…पहिलो पटक सम्पर्क गर्दा यस्तो भयो…
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १४, २०७८ समय: १६:०९:४३
August 30, 2021 272
हँलिसो मुहार, ‘स्टाइलिस्ट’ कपडा लगाएकी सन्ध्या बंसलको उमेर ४० वर्ष भन्दा जो कोहीलाई झट्ट पत्यार नलाग्न सक्छ । तपाई जम्मा ३० को उमेरको देखिनुहुन्छ, यसको राज के होला ? उनी भन्छिन्, ‘यसको राज हो – नो बोइफ्रेन्ड, नो हस्बैन्ड, नो फेमली र नो टेन्सन,’ सन्ध्याले हाँस्दै यसको जवाफ दिन्छिन् ।
सन्ध्या एक नाम चलेको कम्पनीको मार्केटिङ प्रोफेशनल हुन् । उनी दिल्लीमा एक भाँडाको फ्लयाटमा बस्छिन् । उनी एक्लै बस्नुको कारण हो – उनी ‘एसेक्सु`अल’ (यौनि`क) हुन् । उनले विवाह गरेकी छैनन् र परिवारबारे उनको धारणा पनि फरक छ ।
‘एसेक्सु`अल’ती व्यक्तिलाई भनिन्छ जो प्राकृतिक रुपले कुनै पनि व्यक्ति (महिला तथा पुरुष) सँग यौन आक`र्षण महसुस गर्दैनन् । यो एक किसिमको यौ`न चलन (सेक्सु`अल ओरि`एन्टेशन) हो ।
‘परिवार भन्दा पहिचान माथि’
सन्ध्या चाहादिनन् कि आफ्नो पहिचान परिवारको परम्प`रागत ढाँचामा हराएर जाओस् । उनलाई लाग्दैन एक खुसी परिवारको लागि पति–पत्नी र बच्चाको आ`वाश्यकता पर्छ । परिवारको लागि हरेक व्यक्तिको अलग परि`भाषा हुनसक्छ भन्छिन् उनी ।
सन्ध्या भन्छिन्, ‘२३–२४ वर्षको उमेरमा मलाई लाग्न थाल्यो की म केही फरक छु । त्यो बेला मेरो उमेरको केटी`हरुको ब्वाइफ्रेन्ड बन्न थालेका थिए । उनीहरु केटालाई डेट गरिरहेका थिए र सम्बन्ध राखि`रहेका थिए ।
तर मेरो भने त्यस्ते केही भएको थिएन ।’ ‘त्यस समय मलाई एउटा युवक खुब मन परेको थियो । मलाई उसको हात निक्कै राम्रो लाग्थ्यो । सँगै रहदा`रहँदै उसका आशाहरु बढ्न थाले र यो समान्य पनि थियो । तर जब कुरा से `क्सको नजिक पुग्यो मैले एकदम अस`हज महशुस गरे ।
मेरो शरीरले यी सब कुरा स्विकारनै गर्न नसक्ने महशुस गरे । मलाई से क्सको आवश्यकतै नभएको महशुस गरे ।’उनलाई से क्सलाई लिएर ड`र पनि थिएन र आफ्नो जिन्दगीमा से `क्स बिना कमी पनि महशुस गर्थिइन् ।
कसरी चिनिन् आफ्नो यौ निकता ?
उनी भन्छिन्, ‘म सम्बन्धमा रोमान्टिक झुकाव त राख्थे तर मलाई कसैप्रति पनि यौ न आकर्षण (सेक्सु`अल एट्रेक्शन) महशुस भएन । जुन युवक मेरो प्रेमी थियो, मलाई उसको हातमा समातेर हिड्न निकै मन पर्दथ्यो ।
उसलाई अंगालो मार्न, ऊसँग समय बिताउँन… मलाई निकै खुसी लाग्थ्यो । तर से क्सको समय मलाई निकै पी डा महसुुस हुन्थ्यो । मेरो शरीरले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिदैन थियो ।’
सन्ध्याले यो कुराको अनुभव धेरै पटक गरिन् । हरेक पटक शारीरिक सम्बन्ध`सम्म पुगेपछि उनी पछाडी हट्ने गर्थिन् । जब उनले आफ्नो साथीलाई यी सबै कुरा सुनाइन् उनलाई डाक्टरकोमा जान सल्लाह दिइयो ।
यद्यपि, सन्ध्याले डाक्टरकोमा जानु अगाडी नै यो विषयमा पढ्न र बुझन सुरु गरिन् । यसको लागि उनले इन्टरनेट र यौ निकता (से क्सुअलिटी)बारे जानकारी दिने वेबसाइडको सहयोग दिइन् । उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत् केही यौ निकता (से क्सुअलिटी)सँग सम्बिन्धित केही गु्रपमा जोडिइन् ।
सन्ध्या भन्छिन्, ‘सुरुमा मलाई लागेको थियो कि म कुनै गम्भि`र स`मस्यामा छु । आफुनो सम्बन्ध टुटनुलाई म आफै दोषी ठान्थे । जसरी मैले यौ`निकताका बारेमा पढ्न र बुझन थाले आफूले आफैलाई स्वीकार गर्न सुरु गरे । बिस्तारै मैले बुझन थाले, मलाई कुनै रो`ग छैन र म असामान्य मानिस पनि होइन ।
सामाजिक सञ्जालबाट मैले मजस्तै अन्य ए|सेक्सुअल व्यक्तिहरुलाई पनि चिन्न थाले । यसरी समयसँगै म आफ्नो शरी`र र यौ`निकता(से`क्सुआलिटी)को विषयमा सहज हुन थाले ।
त्यसपछि उनले पार्टनर खज्ने प्रयास गरिनन् भन्ने प्रश्नमा सन्ध्याको जवाफ यस्तो छ, ‘मेरो धेरै अनुभवहरुबाट सिकिसकेको थिए कि यदि कुनै पुरुषसँग सम्ब न्धमा रहे भने पनि विगतको जस्तै हुने छ ।
यो बिचमा म आफ्नो लिंग पहिचानको विषयमा धेरै गम्भि र भइसकेको थिए । त्यसैले केही गरी पनि म सम्झौता गर्न तयार थिइन । मलाई यो पनि थाहा थियो की कोही एसे क्सुअल केटा मात्र मेरो साथी बन्न सक्छ । त्यसैले मैले कसैसँग डेट गर्न र जोडी खोज्नै छोडिदिए ।’
कस्तो परिवार चाहन्छिन् सन्ध्या ?
त्यसोभए के से क्सुअल समुदायमा उनले कोही पार्टनर भेटिनन्, जोसँग उनी जीवन बिताउँन सक्छिन् । यसमा सन्ध्याको भनाइ छ, सामाजिक सञ्जालमा उनले धेरै व्यक्ति भेटिन्, तर वास्तविक जीवनमा कोही छैनन् ।
उनी भन्छिन्, ‘धेरै मानिसहरु यौ निक हुन्छन्, तर सही जानकारी नपाएका कारण उनीहरु आफैलाई बुझन सक्दैनन् । कोही मानिसहरु सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण सर्वाजनिक रुपले आफ्नो यौनि`कताका बारेमा व्यक्त गर्न सक्दैनन् र भित्रभित्रै दुखी बन्छन् ।’ यदि उनले ए सेक्सु`अलिटी समुदायबाट कोही राम्रो युवक पाइन् भन यसबारे उनी सोच्नेछिन् ।
एक यौ`निक महिलाको रुपमा उनका लागि परिवार के हो ?
यसको जवाफमा सन्ध्या भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म त म सिंगल छु । आगामी दिनमा पनि म सिंगल नै रहनेछु । हाललाई मेरा साथीहरु, आफ्न्त म बसेको भवनमै बस्ने केटीहरु नै मेरो परिवार हो । हामी फरक–फरक कोठामा बसेपनि हाम्रो भान्छा साझा छ । एक अर्काको सुख दुखमा साथमा हुन्छौ । म चाहदिन की परिवार मसँग यसरी हाबी होस् जसको कारण मेरो पहिचान नै बिग्रियोस् ।
एक्लै बस्न डर लाग्दैन ?
सन्ध्याले केही गरी आफूले चाहे जस्तो पाटनर पाएमा उनीसँग सम्बनधमा रहन सक्छिन् तर त्यसको केही आफ्नै नियम हुने छ । उनी भन्छिन् –‘परिवार शब्द सुनेर मेरो मनमा जे कुरा आउँछ त्यसमा मेरो पाटनर त हुन्छ साथै खाली ठाउँ पनि ।
म चाहन्छु की हामी एउटै घरमा बसौ तर हाम्रो कोठा फरक फरक होस् मात्र हाम्रो भान्छा एक होस् जहाँ हामीसँगै मिलेर खाना बनाउँन सकियोस् । हामी फरक फरक कोठामा रहे पनि भावनात्मक रुपमा एक अर्काको साथमा हुन सकियोस् ।
आमा बन्ने र बच्चाको बारेमा सोध्दा सन्ध्या भन्छिन् –‘बच्चा मलाई अरुकै राम्रो लाग्छ । म आफ्नो बच्चा चादिन मलाई लाग्दै कि बच्चा नचाहदैमा महिला कमजोर हुनछे । उनी फेरि भन्छिन् –‘मानिसहरु सधैँ मलाई सोध्ने गर्छन ,तिमी एक्ले बस्छौ बच्चा भएन भने बुढेशकालमा कसले हेर्छ ?
मेरो सिधा जवाफ यही हुन्छ ः के सबै बच्चाले बुढेशकालमा हेरचाह गर्छ ? म मेरो बुढेसकालको लागि आफै सेभिङ गरिरहेको छु । मलाई थाहा छ म एक्लै छु त्यसैले आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ । म मिठो खाना खान्छु । योगा गर्छु र कुनै पनि विषयको निर्णय सोचेर लिने गरेको छु । ’ सन्ध्याको आफ्न्ता र परिवार विवाहको लागि आग्रह गरिरहन्छन तर उनी सबैलाई अस्वीकार गर्छिन ।
‘विवाह नगर्दा केही बिग्रदैन’
उनी भन्छिन्, ‘मेरो सानो बहिनीको विवाह भइसकेको छ । त्यसैले विवाहको दबाब धेरै आउँने गरेको छ । तर मैले आफ्न्ता र परिवारको यो विषयको कुरा नै सुन्न छोडिसकेको छु । म आफैमा आत्मानिर्भर छु । म एक्ले खाना खान जान्छु ।
कयौ पटक म बिरामी पर्दा पनि एकलै जाने गरेको छु । मलाई विवाह जीवनमा आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । । मेरो हिसाबमा मेरो जरुरत भनेको मेरो मर्जी हो । जीवन जीउने स्वतन्त्रता र शान्ति ।’
उनको अफिस र बाहिरी दुनीयाँमा मानिसहरुको रवैया कस्तो हुन्छ ?
यो कुरामा उनी भन्छिन्, ‘मानिसहरु म ४० वर्षको भन्दा पत्याउँदैन । म सिंगल छु र कुनै सम्बन्धमा छैन भन्दा विश्वास गदैनन । मैले झूठ बोल्दै छु र म धेरै सम्बनधमा छु की मलाई केही रोग छ भन्छन् । मानिसहरु मेरो बारेमा अनेक कुरा गर्दन तर म वास्ता नै गर्दिन ।
मेरो साथी धेरै राम्रो छ तर एसे क्सुअल हो भन्दा न त्यसलाई बुझछ नत स्वीकार नै गर्छ । उ मेरो धेरै चि न्ता गर्छ र सधैँ डाक्टरको जाने सल्लाह दिन्छ । तर म डाक्टरकोमा जादिन किन भने मेरो लागि सामानय समस्या हो ।’
समाजको एक वर्ग यस्तो लाग्छ जो समलिंगी, ट्रान्स या एसेक्सुअल सम्बन्धको मान्यता मिल्यो भने परिवारको ढाचा बिग्रनेछ । उनी भन्छिन् –‘म धेरै सामान्य भाषामा सम्झाउँने कोसिस गर्छु । कसैको पनि बँगैचामा एक रङको फूल हुदैन । धेरै रङको फूल भएर नै बँगैचा सुन्दर देखिए जस्तै फरक फरक मानिसले गर्दा हाम्रो श्रृष्टि सुन्दर छ ।’
सन्ध्या भन्छिन्, ‘दुनियााको आमा यति ठूलो छ की केही मानिसहरु विवाह नगर्दैमा बच्चा नजन्माउँदैमा केही पनि बिग्रदैन ।’ बीबीसी
Last Updated on: August 30th, 2021 at 4:09 pm